९० बर्षीया आमैको भनाई ‘धन्न सरकार छ र त बाँचेकी छु’ – Palpa Samachar
९० बर्षीया आमैको भनाई ‘धन्न सरकार छ र त बाँचेकी छु’
By palpa samachar	 On Mar 14, 2020
बगनासकाली गाउँपालिका वडा नं. ७ खानीगाउँ झाक्रिस्थान गाउँको सिरानको घर । शनिवार दिउँसो सिमसिम पानी परिरहेको थियो । पंक्तिकार र पत्रकार साथी दयाराज न्यौपाने उनीहरुको घरमा पुग्दा अँधेरो कोठाभित्र कुनामा रहेको चुलोमा ६० वर्षीय छोरा वेदराज भट्टराईले आगो सल्काउन लागेका थिए । उनकी आमा ९० वर्षीया आमा गोमता भट्टराई दैलो छेउमा टुक्रुस्क बसेर छोराले कतिबेला आगो सल्काएर खुवाउला भन्ने आसमा थिइन् ।
गोमताका छोरा बेदराजले आँखा देख्दैनन् । उनी जन्मेको ६ बर्षमै आँखा पाक्ने बिरामी हुँदा सही उपचार नपाएपछि सधैका लागि दृष्टि गुमाए । बेदराज हातैले छामेर हरेक दिन चुलोमा आगो बालेर बुढी आमालाई खुवाउँदै आएका छन । हुन त गोमताका ३ भाई छोरा छन् । जेठा र कान्छा छुट्टिएर बसेका छन् भने माइला वेदराज र गोमता त्यो घरमा बस्छन् । दुख सुखमा छिमेकमा रहेका उनका अरु २ छोराहरुले पनि सहयोग गर्छन् ।
गोमताको नागरिकता अनुसार उनी ९० वर्षकी भएको देखिएपनि आफू १०० बर्ष पुगेको गोमताले बताइन् ।
उनको बिहे ७ बर्षको उमेरमा भएको थियो । गुल्मी हर्मिचौर उनको माइत हो । ७ वर्षको उमेरमा दुलही बनाएर खानीगाउँ ल्याएको उनलाई अझै पनि सम्झना छ । ‘भर्खर ७ बर्ष लागेकी थिए, दुलही बनाएर यहाँ ल्याएका हुन्, बालखैमा बुहारी भएर भित्रिदा र त्यसपछिको दुःख कहिल्यै बिर्सन्न ।’ उनले भनिन् । बुढ्यौलीकै कारण अहिले गोमताको अनुहार चाउरी परिसकेको छ तर उनी टाठै बोल्छिन् र कानले पनि टाठै सुन्छिन् ।
कलिलो उमेरमा एकल हुनुपर्दाको पिडा
गोमताले बिधवा जीवन बिताउन लागेको ६० वर्ष भइसक्यो । ६० वर्ष अघि उनले आफ्ना पतिलाई सधैका लागि गुमाइन् । गोमतालाई पति गुमाउनुपर्दाको पिडा एकातिर थियो भने अर्कोतिर समाजमा एकल महिलाको रुपमा सम्मानित रुपमा बाच्नको लागि गर्नुपरेको संघर्ष । उनका कान्छा छोरा चन्द्रकान्त भट्टराईले बावुको निधनपछि आफूहरुलाई हुर्काउन बढाउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै भर
बुढेसकालमा गोली हानेर मार्छन् भन्ने हल्ला गाउँमा त्यसताका खुबै चलेको थियो । यो कुरा गोमताले पनि थाहा पाएकी थिइन् । तर त्यो हल्लामात्रै रहेछ भन्ने कुरा गोमताले तवमात्रै चाल पाइन् । जव सरकारले बुढाबुढीलाई बृद्ध भत्ता बाड्ने कार्यक्रम ल्यायो । अहिले गोमताले मासिक ३ हजार र उनका छोरा वेदराजले मासिक १६ सय रुपैयाँ खुरु खुरु बुझ्दै आएका छन् । गोमताले अगाडि भनिन् “धन्न सरकार छ र त बाँचेकी छु ।” उनले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै रकमले उनले दाल, चामल, तरकारी सहित खान मन लागेका कुरा किन्ने गरेकी छन् । गोमताले अगाडि भनिन्– सरकारले छोराले भन्दा राम्रो सहयोग गरेको छ । नत्र म बुढीलाई कसले हेर्ने थिया र ?
गोमताका छोरा वेदराजले पनि आफूहरुले मासिक रुपमा भत्ता बुझेर घर गुजारा चलाउँदै आएको बताए । उनले भने–“हामी जस्ता दुखी गरिवका लागि भत्ता दिने सरकारको जय होस् ।”
स्थानीय सरकार पनि जेष्ठ नागरिकसँगै
अघिल्लो वर्ष बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्यालले भट्टराईको घरमै पुगेर खाद्यन्न तथा न्यानो लुगा प्रदान गरेका थिए । अहिले स्थानीय खानीगाउँ स्वास्थ्य चौकीले पनि बेला बेलामा उनीहरुको घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै आवश्यक औषधी र परामर्श दिँदै आएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्यालले जेष्ठ नागरिकहरु समाजका लागि पनि अमुल्य सम्पत्ति भएकोले उनीहरुको दैनिकीमा खुशीयाली रहने गरि बातावरण मिलाउनुपर्ने बताए ।
माथागढीको चिदीपानीमा एक हप्ते दुना टपरी बनाउने तालिम सुरु